Itoobiya: Natiijada codbixinta doorashadii shalay dhacday oo la sugayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dalka Itoobiya oo ay shalay ka dhacday doorashada xildhibaanada baarlamaanka Federaalka iyo kuwa dowlad deegaanka ayaa lasoo xiray googihii cod bixinta, waxaana bilaabatay tirinta codadkii la dhiibtay.
Gudiga doorashada ee dalkaasi ayaa sheegay in ay codkooda dhiibteen 80% (Sideetan boqolkiiba) dadkii horay isu diiwaangaliyay.
Malaayiin Itoobiyaan ah ayaa cododkooda ka dhiibtay doorashadan oo ah tii u horaysay ee guud tan iyo intii u u geeriyooday hogaamiyihii waqti dheer xukumayey dalkaas ee la oranjiray Males Zenawi.
Rai’sal wasaarihii Males Zenawi badalay Hailemariam Desalegn, ayaa la filayaa in uu guul wayn gaaro, iyagoo la ogyahay in mar kasta uu doorashooyinka si weyn ugu guuleysto xisbiga uu ka tirsan yahay ee EPRDF.
Xisbigiisa EPRDF ayaa talada hayay tan iyo 1991, Laakiin mucaaradku waxa ay leeyihiin xoriyad la’aanta saxaafadda ayaa ka dhigan in aysan kolna doorashadu noqonaynin mid xalaal ah oo si xor ah u dhacda.
Dhanka gobolka deegaanka Soomaaliya, gudiga doorashada ayaa sheegay in ay isdiiwaan galiyeen ku dhawaad 3 milyan.
Xisbiga Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa la filayaa in uu guul wayn gaaro magaalada Qabri-dahar waa deegaankii xildhibaan ahaan looga soo doortay Madaxwaynaha Deeganaa Soomaalida Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar, oo ay xildhibaanadada deegaankuna ay madaxwaynenimo u sii doorteen.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa shalay codkiisa ka dhiibtay magalaada Qabridahar isaga oo xildhibaanimo u sharaxan markale. Waa madaxwaynihii 1-aad ee xilkiisa dhamaysta oo 5 sano oo xiriir ah talada deegaanka Soomaalida haya.
Doorashadan guud waxaa loo codaynayaa xildhibaanada Federaalka iyo kuwa Dawlad Dgaanada. Xildhibaanada heer federal ku guulaysta waxa ay doorandoonaan Rai’sal wasaare. Xildhibaanada heer deegaana waxa ay soo dhisi doonaan Madaxwayneyaasha.
Gudiga doorashada ayaa laga warsugayaa in ay shaaciyaan natiijada doorashada, inkastoo ay iska caddahaya cidda guushu raaci doonto.